သမိုင်းပညာရှင်တွေမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့ ပုဂံမြို့ကအမှတ်အသားတခု – အနုပညာရပ်ဝန်း
လူအရောက် အပေါက်နည်းတဲ့ ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခု ရေကန်လိုလို ဘာလိုလို ကျောက်တုံး ကြီး တစ်ခုကို ထွင်းထားတာ တစ်ဖက်မှာ တော့ပုဂံခေ တ်က အုတ်တွေလို ပဲ ရှေ့ဟောင်း အုတ်တွေ တွေ့ရတယ် ထူးဆန်းနေတာက ဒီကျောက်တုံး ပေါ်မှာဘယ်သူ ထွင်းထု ခဲ့တာလဲ မသိတဲ့ QR Code ပုံစံလိုလို အလယ်မှာ ကတော့ နာဇီ logo နဲ့ လည်းတူသလိုလို
ဘယ်သူတွေက ဒါကို ဘာအတွက် လုပ်ထားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး ဗျာ။ လုပ်ထားတာ ကတော့ သေသေ သပ်သပ်ပဲ။ တချို့နေရာလေးတွေတော့ ပျက်စီးနေပြီ ဝင်္ကဘာ ပတ်လမ်းလား ဘာလား ? ဒီဘက်ခေတ်မှ ဒါကို ထွင်းထားတာ မဟုတ်တာက တော့ သေချာလောက်တယ် အား အားယားယား ဘယ်သူကမှာ ဒီတောင်ပေါ်ကို တ က်ပြီး လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူ
Alien တှေ လုပျခဲ့တာလား အရငျ ဒီနရောက ဘာကွီးလဲ ? ဓမ်မရံကွီး ဘုရားတောငျ Egypt က ပိရစျမစျတှေ နဲ့ ပုံစံတူလို့ အလောငျးစညျသူမငျး စီးခဲ့တဲ့ ဖောငျစကွာယာဉျ က UFO လို့ ပွောတာတှေ ရှိခဲ့ဖူးတယျဆိုတော့ နာဆာအဖှဲ့အစညျးထံမှ လြိုဝှကျစှာပေါကျားလာတဲ့ ဓါတျပုံ မြားထဲ မှာ ဓမ်မံရံကွီးဘုရားဓါတျပုံ ပါဝငျတယျ ဆိုတာတော့ ဟုတျတယျ ပုဂံ ဘုရားတှေ ပေါျမှာ UFO ပြံဝဲတယျ ဘာတယျ ဆို တာကတော့ ယုံတမျးစကားလား ဘာလား သခြောမသိဘူး
Egypt မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ရှေ့ဟောင်းရုပ်ထု လေးလဲ အောက်ဆုံးမှာပြ ထားတယ် ကျွန် တော်တို့တွေ အခုသုံးနေတဲ့ QR Code ဆိုတာက အဲ့ ရုပ်ထုကနေ ပုံစံကို copy ယူထားတာလို့ ဖတ် ဖူးပါတယ်..အခုဒါက ဘာမှန်တော့ မသိဘူး စိတ် ဝင်စားစရာ တော့ကောင်းတယ် ဒီနေရာကို ကျွန် တော်သိတာကတော့ ကြာနေပြီ တချို့လူတွေလဲဒီနေရာကို သွားတယ် ဓာတ်ပုံရိုက် ကျတယ်။ လူသိတော့ နည်းတယ်။ ဒီနေရာက တုရင်တောင် ဘုရားကြီးရဲ့ တောင်ဘက်မှာ ရှိပါတယ် Google က နေလဲ နေရာကို ပြထားပါ တယ်နော်။ ပုဂံရောက်လို့ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ သွားကြည့်ပါ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆိုပို အဆင်ပြေတယ်။
c red i t Hla Than Aung
ဘယ်သူတွေက ဒါကို ဘာအတွက် လုပ်ထားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး ဗျာ။ လုပ်ထားတာ ကတော့ သေသေ သပ်သပ်ပဲ။ တချို့နေရာလေးတွေတော့ ပျက်စီးနေပြီ ဝင်္ကဘာ ပတ်လမ်းလား ဘာလား ? ဒီဘက်ခေတ်မှ ဒါကို ထွင်းထားတာ မဟုတ်တာက တော့ သေချာလောက်တယ် အား အားယားယား ဘယ်သူကမှာ ဒီတောင်ပေါ်ကို တ က်ပြီး လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးး
Alien တွေ လုပ်ခဲ့တာလား အရင် ဒီနေရာက ဘာကြီးလဲ ? ဓမ္မရံကြီး ဘုရားတောင် Egypt က ပိရစ်မစ်တွေ နဲ့ ပုံစံတူလို့ အလောင်းစည်သူမင်း စီးခဲ့တဲ့ ဖောင်စကြာယာဉ် က UFO လို့ ပြောတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှ လျိုဝှက်စွာပေါက်ားလာတဲ့ ဓါတ်ပုံ များထဲ မှာ ဓမ္မံရံကြီးဘုရားဓါတ်ပုံ ပါဝင်တယ် ဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ် ပုဂံ ဘုရားတွေ ပေါ်မှာ UFO ပျံဝဲတယ် ဘာတယ် ဆို တာကတော့ ယုံတမ်းစကားလား ဘာလား သေချာမသိဘူး
ပုံသဏ္ဍာန် ထူးခြားလှတဲ့ ရှေးဟောင်းရွှေထည်ပစ္စည်းများကို မြောင်းမြို့နယ်မှာ တွေ့ရှိ